Usoro njem India dị ka ndị na-egwu ụlọ ọrụ isi hụrụ
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » India » Usoro njem India dị ka ndị na-egwu ụlọ ọrụ isi hụrụ
Foto sitere na Farkhod Vakhob sitere na Pixabay
Ikekwe naanị ihe nkịtị gbasara njem na India ugbu a, ma ọ bụ ebe ọ bụla gburugburu ụwa maka okwu ahụ, bụ na ọ nweghị ihe dị mma. Yabụ na ọ kwesịrị ka anyị gee ntị n'echiche nke ndị isi ụlọ ọrụ na usoro ha na-eme njem na njem nlegharị anya ugbu a n'etiti ọgba aghara ọrịa COVID-19.
Onye njikwa njikwa nke Creative Travel Rajeev Kohli na-arụ ọrụ dị mkpa na SITE (Society of Incentive Travel Executives) na òtù ndị ọzọ, yana ikwu okwu n'oge na-adịbeghị anya na IATO (Indian Association of Tour Operators) mgbakọ na Gandhinagar, Gujarat. , bụ́ ebe o nyere aro ụfọdụ na-adọrọ mmasị banyere oge ndị a dị oké mkpa ihu. Nna Rajeev, Ram Kohli, tọrọ ntọala Creative Travel na ya onwe ya eduzila IATO, PATA (Pacific Asia Travel Association), na òtù ndị ọzọ na njem na njem nlegharị anya.
Rajeev na-eji ụbọchị COVID ndị a nweta ahụmịhe obodo nke ya. Ọ nọwo na-akwọ ụgbọ mmiri, na-eleta ebe nkiri omenala, na-eme ihe ndị ọ na-eyighị ka o nweburu oge. Ọ bụ amụma ya na onye ọ bụla ga-amarịrị ibi na coronavirus a ka ọtụtụ ụdị na-abata na-egwu egwu. O kwenyere na njem ga-amalite ịla azụ azụ n'afọ a, ma na-agbakwụnye na gọọmentị ga-achọpụtakwa na mfu nke ego ha nwetara bụ n'oge ọ na-adịrị ndị ka nwere ọganihu na-azụ ahịa. Ọ sịrị:
2022 ga-adị mma karịa afọ gara aga, naanị n'ihi na ọ ga-abụrịrị.
N'ezie, ọ bụghị ndị niile na-etinye aka na ụlọ ọrụ njem na-enwe nsogbu nwere otu ma ọ bụ ọbụna echiche yiri nke ahụ banyere otu ụlọ ọrụ ahụ ga-esi etolite na 2022. Ụdị echiche na echiche dịgasị iche iche sitere na nchekwube na-ekwupụta enweghị nchekwube n'oge ndị a na-ejighị n'aka.
Onye isi nchịkwa nke Sayaji Hotels, Raoof Dhanani, chere na n'ozuzu ngalaba ile ọbịa agbanweela ogo 180. kemgbe COVID, na afọ ọhụrụ na-abịa olileanya ọhụrụ, chi ọbụbọ, na ìhè ọhụrụ. Ọ na-ahụ mgbanwe dị ukwuu na okporo ụzọ na mmụba nke ọchịchọ site na iji nkà na ụzụ eme ihe ọhụrụ, nke ọ na-ebu amụma ga-enwe mmetụta dị ukwuu karị na ụlọ ọrụ ahụ.
Onye isi nchịkwa nke mmụọ njem njem, Jatinder Taneja, bụ onye na-arụsi ọrụ ike na PATA, na-ekwu na ọ na-esiri ike ịkọ 100% ihe ga-eme n'afọ na-abịa, ma ọ na-anọgide na-akpakọrịta mgbe niile na ndị isi ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ahịa ma nwee obi ike. na njem ime ụlọ ga-aga n'ihu na-eto eto. O kwuru na njem nlegharị anya omenala na okike nke ụlọ ọrụ ya na-enye na-egosi atụmanya dị mma nakwa na ọ dị mkpa ka ị na-elezi anya na ihe ndị dị ugbu a.
Onye isi nchịkwa na-ahụ maka njem njem, Sunil Gupta, kwenyere na njem ụlọ dị elu ga-aga n'ihu na-eto eto, dị ka njem ụlọ n'ozuzu ya ga-adị. Otú ọ dị, ọ na-eche na njem nlegharị anya mba ụwa ga-abụ nnukwu ihe ịma aka, na-ekwu na njem ndị na-apụ apụ nwere ike ichere ruo 2023 iji nwetaghachi azụ. Ọ na-eche na ụlọ ọrụ MICE nke ụlọ, gụnyere agbamakwụkwọ na ihe omume, ga-amalite ịmaliteghachi n'April nke afọ a ma hụ njikọ ikuku ka mma dị ka onye na-anya ụgbọ ala nke ga-eme ka njem ụlọ n'ụzọ dị ukwuu.
Leisure Hotels Group, nke Vibhas Prasad na-edu, kwenyere na mgbe February nke afọ a gasịrị, njem ga-akawanye mma na omume a ga-aga n'ihu ruo oge fọdụrụ nke 2022. Ha na-ahụkwa na usoro ndị a na-ahụ anya gụnyere ezumike ịkwọ ụgbọala, njem na ndị enyi na ndị ikwu, onwe ha. -drives, ma na-arụ ọrụ site na hotels/ebe ntụrụndụ. Ememe ahụike ga-abawanye dị ka njem ahụmahụ ga-eme, ndị mmadụ ga-eji atụmatụ oge dị mkpirikpi mee njem.
Onye guzobere Tree of Life Resorts, Himmat Anand, ejirila ọtụtụ afọ na ụlọ ọrụ ọbịa, ma dịka onye nnọchi anya ma na họtel. Ọ na-ekwu na ọ dịghị ihe a pụrụ ibu amụma ọzọ. Ọ bụ ọnọdụ nchere na nche. Atụmatụ A, B, C, na D ga-adị njikere iche ọnọdụ ahụ ihu, ma njem ọpụpụ na mbata ga-ewe oge.
Onye isi ụlọ ọrụ ọbịa nke EllBee n'ụwa niile, Sahib Gulati na-ekwu na nkuzi sitere n'oge gara aga na-agwa anyị na a ga-enwe ejighị n'aka na 2022. A pụghị ibu amụma na-eju anya, na-eche na onye na-eto eto na-ere ụlọ oriri na ọṅụṅụ. "Dị ka ụlọ ọrụ, anyị nwere olile anya na ọnọdụ ahụ na-akawanye mma," ka ọ na-ekwu. Sahib tiri mkpu, "Ka anyị nwee olileanya maka ihe kacha mma."
Ihe na-echere maka njem njem na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya India ga-apụta n'ụbọchị ndị na-abịa, dị ka ọ ga-adị maka ndị niile nọ na ụlọ ọrụ gburugburu ụwa, na ndụ ọhụrụ a na-emeso COVID.
Ozi ndị ọzọ gbasara India
Asia Covid Ile ọbịa India MICE
Ahịrị ụgbọ mmiri nke atọ bịanyere aka na nkwekọrịta ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ na Hawaii
Hong Kong machibidoro ndị njem si mba 150 na-ebufe njem ugbu a
Ọnụ ahịa ahịa nchọpụta Covid-19, oke na mmetụta...
Israel ghere oghe maka ndị njem nlegharị anya ịgba ọgwụ mgbochi na enweghị ọgwụ mgbochi…
Ahịa Oligonucleotide API 2022 Ndị egwu egwu, SWOT...